ကျွန်းစုမြို့နယ် နေကြာအော်ကျေးရွာ အရှေ့၌ မျောပါလာသည့် သစ်တုံးအား တိုက်မိခဲ့ ရာမှ ခရီးသွား ? - Yangon Media Group
ကျွန်းစုမြို့နယ် နေကြာအော်ကျေးရွာ အရှေ့၌ မျောပါလာသည့် သစ်တုံးအား တိုက်မိခဲ့ ရာမှ ခရီးသွား ?
ကျွန်းစု၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၃
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစု မြို့နယ် ရေမြစ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု နေကြာအော်ကျေးရွာအရှေ့ရေပြင်၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်က ခရီးသွားစပိဘုတ် လှေတစ်စင်း မောင်းနှင်နေစဉ် မျောပါလာသော ရေမြုပ်သစ်တုံးအား တိုက်မိခဲ့၍ တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ခရီးသွားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဟိုတယ် နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ကနဦးသတင်းများအရ သိရသည်။
မြိတ်မြို့မှ ကျွန်းစုမြို့နယ်အ တွင်းရှိ ကျွန်းများသို့ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်ထွက်ခွာလာသည့် မြိတ်မြို့အခြေစိုက်၊ ထူးထက်ရှိန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီမှ High Speed အမည်ရှိ Speed Boat အမြန်ရေယာဉ်သည် ပဲ့နင်းဦးစိုး အောင်(အသက်၊ အဘမည်စိစစ်ဆဲ) မောင်းနှင်ပြီး ခရီးသည်အမျိုးသား ၁ဝ ဦး၊ အမျိုးသမီး ခုနစ်ဦး၊ လှေ သားနှစ်ဦး၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၁၉ ဦးတို့ လိုက်ပါလျက် မောင်းနှင် ကျွန်းစုမြို့နယ် ရေမြစ်ကြီးကျေး ရွာအုပ်စုနေကြာအော်ကျေးရွာ အရှေ့ရေပြင်အရောက် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်က မျောပါလာသော ရေမြုပ်သစ်တုံး အားတိုက်မိ၍ တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လှေတိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွား ရာနေရာသို့ နေကြာအော်ကျေးရွာ မှ ရာအိမ်မှူး ဦးတိတ်နှင့်ရွာသူ၊ ရွာသားများမှ ပိုက်လှေများဖြင့် သွားရောက်၍ ကူညီကယ်ဆယ်မှု များဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရာ ခရီးသည် များထဲမှ ဒေါ်ကြင်စု(ခ)ဒေါ်ခင်ချို စက်မှုဇုန်(၁)၊(၆၆)နှစ်၊ မန္တလေး မြို့နေသူနှင့် ဒေါ်ခင်သောင်းတင် (၆၈)နှစ်၊ ညောင်တုန်းလမ်း၊ စမ်း ချောင်းမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီးနေသူတို့ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား တိမ်းမှောက်လှေ၏ ဗိုက် အောက်မှ သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရ ကြောင်း၊ ကျန်ရှိခရီးသည်များနှင့် သေဆုံးသူတို့၏ အလောင်းများကို နေကြာအော်ကျေးရွာသို့ခေါ် ဆောင်၍ ကူညီကယ်ဆယ်ထားခဲ့ကာ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်တွင် မြိတ်မြို့မှ ရောက်ရှိလာသည့် Speed Boat အမြန်ရေယာဉ်များ ဖြင့် ခရီးသည်များနှင့် သေဆုံးသူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် အဆုတ်ထဲ ရေဝင်သူ ကိုလှဝင်းကျော်(၃ဝ)နှစ်၊ ရွှေပေါက်ကံရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေသူတို့အား နေ ကြာအော်ကျေးရွာမှ မြိတ်မြို့သို့ သယ်ဆောင်လာခဲ့ရာ ညနေ ၃ နာရီကျော်ခန့်တွင် မြိတ်ပြည်တော် သာလှေဆိပ်သို့ရောက်၍ မြိတ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ လှေ မောင်းနှင်သူအား ကျွန်းစုမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ အရေးယူဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံ့အရေး လုပ်တဲ့သူတွေက နောက်မျိုးဆက်အတွက် စဉ်းစားသကဲ့သို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်မျာ?
ရေနံချောင်းရွာနှစ်ရွာ မြေပိုင်ဆိုင်မှုပဋိပက္ခ တုတ်၊ ဓားလက်နက်တို့ဖြင့် ဖျက်ဆီးမှုများရှိ
AA ၏ လုပ်ရပ်များကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စ ထိခိုက်မှုရှိမည် မဟုတ်ကြောင?
ကျေးသီးမြို့ရှိ သဘာဝရေထွက်ကန်နှင့် ရေဝေရေလဲဧရိယာ ၃၁ ဧကကို ပြည်သူပိုင်အဖြစ်ပြန်လည်စွန့်လွှ?
ရုရှား-အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပထဝီနိုင်ငံရေး နွံဗွက်အိုင်